Hiran State - News: HS:-Bulshada Hiiraan oo mudo 120 maalmood gudahood yeelanaya mamul goboleed
HS:-Bulshada Hiiraan oo mudo 120 maalmood gudahood yeelanaya mamul goboleed
HS:-Wararka naga soo gaaraya caasimada Hiiraan ee B/weyne ayaa sheegaya in gudoomiyaha waqtigiisa dhamaaday uu diyaar u yahay in loo tartamo madaxtinimada Hiiraan mudo cayiman oo leysku ogyahay halkii isaga iska tag la dhihi lahaa.
Gudoomiye C/fatax oo maanta ilaa caawa olole ugu jiray sidii mar uun looga hortagi lahaa in isaga meesha laga dhaqaajiyo oo mudada yar ee ka hartay in doorasho la qabto qof kale la keeno ka hortagayo ayaa siweyn ugu soo tagay meeshii hore ee uu taagnaa kadib markii shir aysan cid kale ka warqabin la yeesheen waxgaradka beesha Xawaadle qaarkood oo siweyn ugu canaantay mudada halka sano ah ee uu joogay waxa uu arimahan noocaan ah uga tabaabusheysan waayey hadii uu siyaasada inuu ku sii jiro doonayo isagoo garaawsaday qaladaad badan oo horey uga dhacay.
Siweyn ayuu odoyaasha ugu calaacalay halka magaalada uu ka howl galiyey shasiyaad uu dhaqaalo siiyey oo dadka ku dhahayo maamulkaan ayaan rabnaa dhaha iyo wax la mid ah.
Maamulka hada jira waxey waxii awood ah iskugu geeynayaan in loo dulqaato oo ay sii joogaan mudada ay doorashada dhaceyso oo sida lagu wado ah wax ka yar 6 bilood halkii uu markii hore baryadan iska daaye aaminsanaa inuu meesha isaga xoreystay oo uu ka tagayo kaliya marka ama malaayiin dolar oo ka gashay Hiiraan la siiyo amaba sidiisa u joogi doono.
Sanadkii tagay horaantiisii ayaa sidan oo kale wafti ka socda dowlada tageen Hiiraan xiligaas oo uu sheeganayey inuu yahay madaxweynaha Dooxada Shabelle si arintaas horta looga tir tiro waxaa lagu qasbay gudoomiye gobol, sanad kadib waa guul u soo hoyatay reer Hiiraan haduu leeyahay dhawr bilood haley dulqaato iyo wax la mid ah.
Hadaba Maxaa dhici karo hadii maamulkaan loo daayo in ay sidiisa u shaqeeyaan.
1- Isla markii la yiraahdo maamulka Hiiraan waa sii joogi karaa waxaa xilkiisii gudoomiyenimo ku soo laabanayo maamulkii gobolka Bay ee ay xilka ka qaatay dhawaan dowlada ileen dadku kalama sharaf badna dowladuna iyadaa tiri dadka iyagaa maamulkooda dhisanayo.
2- Maxaa dhici karaHadaan bulshada waadax looga dhigin xiliga uu maamulkaan joogayo iyo waxa uu qabanayo mudadaas cayiman?
3-Sidee doorasho ku hirgali kartaa hadii maamul og in meesha laga saarayo uu umada sii hortaagnaado?
4- Maxaa dhici kara hadii gudi kumeel gaar ah loo sameeyo Hiiraan maamulkaana bulshada ka mid noqdaan?
Su'aalahaasi oo dhan waa kuwa hada miiska saaran inkasta oo odoyaashii runta sheegi lahaa shirarka qaarkood balamo been ah loo sheegayo oo ay soo xaadirayaan kuwo ka cabsi qaba in marka uu waftigaan baxo la waxyeeleeyo oo laga soo aruuriyey qeybaha kala duwan ee xaafadaha ay magaalada ka kooban tahay.
Gudoomiye C/fatax oo shaley ilaa xaleyto qurbo joog u aragta in hadii uu meesha si sahlan uga tago uu danbiilo noqonayo ay soo wacayeen ayaa kula taliyeen inuu mowqifkiisu ahaado in maamulkiisa loo daayo iney sii shaqeeyaan ugu yaraan 4 bilood amaba ugu badnaan 6 bilood isagoo markaas balan qaadaya inuu inta Hiiraan xoreynteeda ka dhiman uu gacanta ku soo dhigi doono hadii jaaniskaas la siiyo.
Isku soo duuboo sida u maalinkasta mowqif uu aaminsanaa uga tanaasulayo marka ugu danbeyso waxaa imaan doonto Hiiraan madax kama noqon karo qof aan heysan shahaado jaamacadeed kadiba waxuu ku qasbanaan doonaa inuu qof kale u ololeeyo ugu yaraan.
Isku soo duuboo hadii uu maamulkaan sii shaqeeyo iyo hadii kaleba Hiiraan iyo Jubooyinka waxaa ka soo muuqda maamul goboleedyo iyadoona xili aan fogeyn la qaban doono shirar ku saabsan arintaas.
· admin on February 08 2013 18:31:18 · 0 Comments · 1627 Reads ·
14,585,593 unique visits